भिडभाड छ तर एक्ला हुदै छन् बुढाबुढी ! – जनस्वास्थ्य खबर
भिडभाड छ तर एक्ला हुदै छन् बुढाबुढी !
डा. शम्भु खनाल, काठमाडौँ । “बा तपाईंको मुटुले गर्नुपर्नेजती काम गर्न सकेको छैन । मुटु सुन्नेको छ । भर्ना भएर बस्नु राम्रो हुन्छ । तपाईंसँग को आउनुभाको छ त ? “. आज पुन : तिनै बाजे भेटिए जसले मलाई लामो सुस्केरा हाल्दै भनेका थिए , ” छोराहरु बुहारी ले लगे । छोरीहरु ज्वाँईले लगे । बुढीलाई भगवानले लगे। म बुढोलाई कुर्न को आउला र बाबु ? “. म अवाक् भएको थिएँ र आज पनि त्यस्तै नै भयो । तिनै बाजे बेलाबखतमा जसोतसो लौरोको आडले अस्पातलसम्म अाइपुग्छन् । स्या स्या गर्दै भर्खरै प्राण जान्छ कि जस्तो अवस्थामा हुन्छन्। उनलाई बेलाबखतमा उनको मुटुले खिसिट्युरी गरिरहन्छ । उनलाई भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर हेरचाह गर्नलाई कोही हुँदैनन उनको साथमा । उनीसँग एउटा नोकियाको पूरानो मोडेलको मोबाइल हुन्छ । र साथमा एउटा लौरो । छोराबुहारी छोरिज्वाइँलाई फोन लगाउने प्रयास गर्छन् । फोन उठ्छ । वार्तालाप पनि हुन्छ । तर सबै ब्यस्त हुँदा हुन् । फोनबाटै हेरचाह गर्ने बचन दिँदा हुन् ।
आखिर जिन्दगीको कमाइ के हो त ? धन सम्पत्तिले भरिभराउ हुनु हो कि मानसम्मानले भरिभराउ हुनु हो । जीवनको उत्तरार्द्ध कस्तो हुने हो र कसरि जिउने हो त ? मिठो कुरा मुखमा परेर मन खुसि हुने हो कि मिठो बोलि सुनेर । उमेर छँदा मानिस सुख र सुखका साधनका निम्ती दौडिरहन्छ । एक छिन बिश्राम् गरेर त्यो दौडाइको सार्थकता खोज्दैन । हरेक व्यक्तिले राम्रो नै भएको देख्न चहाञ्छ, अनुभुती गर्न चहाञ्छ. । आफ्नो सन्तानको सुखका लागि सपै कुरो त्याग्दछ । जसोतसो गरी जोड्जाड गरिराखेको हुन्छ । किनकि त्यो स्वाभाविक धर्म र स्वार्थ दुबै हुन्छ ।
भाग्यमानी बाबुआमा को हुन् त ? बिरामी पर्दा छीउमा टाउको अडाएर अधकल्चो निद्रामा कुरिरहेको छोरा छोरी हेर्न पाउने बाबुआमा भाग्यमानी हुन ? आफ्नो जन्मदिन सम्झेर जन्मदिनको सुभकामना दिने र मनाउने छोराछोरी पाउनु जीवन सफल हुनु हो ? एक कल फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोध्ने फुर्सद निकाल्ने सन्तान हुनु जीवनको सर्थकता हो ? कि हाम्रो धेरै ठाउमा सुन्नेगरेको र सत्संगमा प्रबचनको अभिन्न बचन ‘आत्माको साक्छ्यत्कार ‘ हुनु जीवनको कमाई हो ? नदेखेको आत्मा र परमात्माको आशा गरेर के गर्नु ? तिनको प्राप्ती भन्दै शान्त ब्यस्त हुनु बाहेक केही होला जस्तो लाग्दैन । किनकी आफैले देखेको र रोपेको सपनाको बिउ जीवनको उत्तरार्द्धमा गएर फ़ल दिदैन भने निर्धन हुनु सरह हो । सन्स्कारले युक्त बोलीबचन र ब्यबहारको अनुभुती हुन नपाएर इश्वोरको भजन गाएर बस्नुपरे के महत्व भयो र ! धर्मले पढाएको मृत्‍‍युपर्यन्तका कर्म सन्तानले गर्देलान् भन्ने आशले हुर्किएका सन्तान “एड्भान्स” भएर आँफैले खरानी घसेर ब्रिद्धाश्रममा बसेर हरिनाम लिनु परे के को आत्मा र परमात्माको पछि पर्नु ।
भवुकताको काँध चडेर कसैलाई प्रभाबित र भावुक बनाउन खोजेको हैन मैले । यो त हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब हो । हाम्रो समाजको नैतीक ह्रासको केबल एक प्रतिनिधी घतलाग्दो उदाहरण मात्र हो । जीवनको उतरार्धमा नागरिकको राम्रो हेरचाह हुन नसक्नु सामाजिक पाटोका साथै राज्यको इच्छाशक्तीको कमजोरी पनि हो । पेन्सन निस्किएका ब्यक्तिको त आर्थिक हेरचाह हुने हुनाले धेरै अपहेलित हुनु नपर्ला । ज्यष्ठ नागरिकको रेखदेखको हेतु बृद्धहरुलाई सहुलियत र सुबिधा नभएको पनि हैन। बृद्ध भत्ता देखी स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपचारको ब्यबस्था पनि राज्यले गरेको छ । तर त्यो पर्याप्त नभएको हो कि । त्यसैले दिनहुँ समाजमा अपहेलित अस्ताउन लागेका बृद्धहरुसँग उठबस गर्नुपर्ने हुन्छ । सिधा ब्यबहारिक पक्षसँग ठोक्किनुपरेको हुन्छ । सायद सुखी मान्छे त कोही पनि अस्पतालमा आउँदैन होला । निशुल्क उपचार भने पनि बृद्धहरुमा देखापर्ने समस्याको थोरै समस्याको मात्रै सम्बोधन हुन सकेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले त उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई ब्यबहारिक कठिनाइहरु सधैंजसो परेको हुन्छ । अनी यस्ता वाक्यहरु बेलाबखत घत पर्ने गरी सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
ज्यष्ठ नागारिकको अवस्था हाम्रो समाजमा दारुण हुँदै गएको छ । नेपालमा ६० बर्षभन्दा माथिको उमेरको ब्यक्तिलाई ज्यष्ठ नागरिक मानिएको छ । हाम्रो जस्तो बिकासोन्मुख राष्ट्रले बिकासका केही फड्को मार्ने क्रममा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र चेतना बढे सँगसँगै ज्यष्ठ नागरिकको जनसंख्या पनि बढेको निश्चित हो । अौसत आयु सन् १९५४ को २७ बर्षबाट सन् २०१५ मा ६७ बर्षको उपलब्धी हासिल गरिसकेको अवस्थामा बृद्धहरुको सँख्या बढ्नुका साथै ति सबैको आर्थिक ,सामाजिक र स्वास्थ्यको हेरचाह गर्नुपर्ने चुनौती थपिएको छ । हालको अवस्थामा कूल जनसंख्याको ८ प्रतिसत ज्यष्ठ नागरिक रहेको तथ्यांकले बताएको छ । ज्यष्ठ नागरिकको जनसंख्या बृद्धिदर कूल जनसंख्या बृद्धिदर भन्दा बढी छ ।
हाम्रो समाजले अँगालेको “सानो परिवार सुखी परिवार “मा बृद्धहरु नअटाएको हुनाले उनीहरुले एक्लिँदै गएको महसुस गरेका छन्। आधुनिकिकरणको जरो बलियो हुँदै जाँदा बृद्धहरु आधुनिक प्रविधिसँग हेलमेल हुन नसकेर एक्लिँदै गएको कुरो सत्य हो । गाउँतिर काम गर्न सक्ने उमेरका धेरै युवाहरु रोजगारिको लागि बिदेसिएका छन् । बर्शेनी ५ लाख युवाहरु बैदेशिक रोजगारीको लागि स्विकृति लिने गर्छन्। नेपालको कूल ग्राह्स्थ उत्पादनको कारीब २५ प्रतिसत उनिहरुकै रेमिटेन्सले धान्ने गरेको तथ्यांक छ । बाँकी रहेका बृद्ध ,बच्चा र महिला मात्रै गाउँमा अडिएका छन्। त्यसमा पनि आफ्ना सन्तानलाइ शहरतिरको राम्रो शिक्षा दिने हेतुले महिलाहरु बच्चा लिएर शहरतिर हान्निन्छन् । अब गाउँतिर त बाझो खेतबारी र त्यसलाई टुलुटुलु हेर्ने दुर्बल बुढाबुढी त हुन् !
शहरतिर परिवारका सबै सदस्य आ आफ्नो कामकाजमा ब्यस्त हुन्छन्। काम नहुँदा मोबाइल टि भि आदिमा । बुढाबुढीसँग हिमचिम् हुनुपर्ने नातिनातिना कम्प्युटर ,भिडियो ग्याम आदिमा तनमन हुन्छन् । अनि कोसँग आफ्ना कुरा राखून् त बुढाबुढीले । त्यसैले बृद्धहरुको एक्लोपना नाप्ने कुनै यन्त्र छैन सायद । किनकी उनीहरु सबैका माझमा छन्, तर बिचरा एक्ला छन्।
उमेर ढल्किँदै जाँदा बुढ्यौलि सँगै केही दीर्घ रोगहरुले पछ्याउन थाल्छन् । उच्च रक्तचाप,घुँडाको दुखाइ, मधुमेह, दम ,मुटुका समस्या आदि रोग त बुढ्यौलिका अभिन्न साथी जस्तै भइसकेका छन्। रोग नै दीर्घ भएपछि उपचार पनि दीर्घ हुने नै भयो। दीर्घ रोगको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले निशुल्क उपचारको प्रयास नगरेको हैन । तर पर्याप्त भने छैन ।
स्याँ स्याँ गर्दै दमका बिरामी निशुल्क औषधी पाइने आशाले अस्पातल अाइपुग्छन् । बर्षौको छिप्पिएको दमलाई सरकारले निशुल्क दिने “साल्बुटामोल” को ट्याब्लेटले कति दिनसम्म उपचार हुनसक्ला र ? साल्ब्युटामलले (दममा प्रयोग हुने श्वासनली खुलाइदिने औषधी ) केही बर्षको प्रयोगपछि काम गर्न छोड्छ । अनि त ” नमस्ते डाक्टर साप । अचेल त छोएन दबाइले ” भन्दै बारम्बार आउँछन् । केही औषधी किनेर सेवन गर्नुपर्छ भनेर भन्दा बृद्धलाई त निशुल्क हैन र भनेर प्रतिबाद गर्छन्। कताबाट महिनाको लगभग रु २००० लाग्ने दमको सबै औषधी निशुल्कमा ल्याएर चित्त बुझाउने हो !
नियमित सधैं नछोडी खानुपर्ने प्रेस्सरको र मधुमेहको औषधी बेलामौकामा ” सप्लाई ” सकिएर तनाब हुन्छ । कताबाट त्यो निशुल्क सदाबहार नियमित उपलब्ध हुने हो ! प्रेसरलाई काम गर्ने औषधी “यम्लोडिपिन ” नामको औषधी सरकारले निशुल्क दिने गरेको छ। जुन कुरा सर्हानिय छ । तर एउटा औषधीले प्रेस्सर नियन्त्रण नभएर अर्को थप्नु पर्‍यो भने निशुल्कमा पाइँदैन । मधुमेहको हकमा पनि उस्तै समस्या रहेको छ । ति बुढाबुढी बिरामीले किनेर खाने उपाय हुँदैन । निशुल्कको आशैआशले भरिएका ती बुढाबुढीको मन कसरी बुझाउन सकिएला ? गम्भीर प्रश्न छ सरकार माथि ।
रोगले गाल्दै लैजाने ,औषधीमूलो गर्ने क्षमता नहुने, एक्लोपना बढ्दै जाने हुनाले बाँच्नुमा सार्थकता देख्न बिस्तारै छाड्दै गएका छन् बृद्ध ब्रिद्धाहरु । त्यसैले त डिप्रेसन र आत्महत्याको समस्या पनि बढेको अनुभव गर्न सकिन्छ । बिभिन्न अध्ययनमा ५३ प्रतिसत ज्यष्ठ नागरिक डीप्रेसनको सिकार भएको तथ्य भेटिन्छ । उमेर बढदै गएपछि बिर्सिने रोगले पनि सताउने गर्छ । बिर्सिने रोग मध्यमा अल्जाइमर रोग केही बर्ष यता धेरै फेला परेको पाइन्छ । जुन सामान्यतया ६० बर्षको उमेरपस्चात देखिने गर्छ । सन् २०१५ को तथ्यांकमा नेपालमा ७८००० जना अल्जाइमर रोगका बिरामी रहेको देखिन्छ । उमेर छिप्पिँदै जाँदा आँखा ,कान ,दिमाग सबै छिपिँदै बिस्तारै साथ छोड्दै जान्छन् । अनि असक्तता र परनिर्भरताले गर्दा बुढाबुढीको मनमा आफू बोझ भएको महसुस किन नहोस् त ।
सार्वजनिक यातायातमा भाडा सहुलियत लिन कठिन हुन्छ बुढाबुढीलाई । ज्यष्ठ नागरिकलाई भनेर छुट्याइएको सिटमा उर्जाले भरिएका सबल युवातन्नेरिहरु बिराजमान हुन्छन्। उनैले विद्यार्थी सहुलियत पनि प्राप्त गर्छन्। बिचरा बुढाबुढीहरुका दुर्बल खुट्टा धर्म राउँदै जसोतसो अडिन्छन्। सायद कसैले पनि ति चाउरिएका अनुहारमा आफ्नो भबिस्यको रुप देख्दैनन् होला ।
बर्तमान अवस्थामा नेपालको ठूलो सँख्यामा सकृय जनसक्ती बिदेशमा पसिना बगाइरहेको छ । नेपालको प्रजनन दर र मृत्‍युदर घट्दो क्रममा छ भने औसत आयु बड्दो छ। नेपालले सन् २०३० सम्म “पपुलेसन बोनस ” ( अरु जनसंख्याभन्दा सकृय जनसंख्याको ठूलो पारीमाण ) को अवसर प्राप्त गरेको छ । जनसंख्याको संरचनामा सक्रिय जनसंख्या निश्कृय जनसंख्या भन्दा बढी हुने सौभाग्य बारम्बार आउँदैन । यस्तै समयलाई उपयोग गरेर धेरै राष्ट्र बिकसित भएका छन् । तर हामी रेमिटेन्सको आर्थिक देनमा रमाइरहेका छौँ । जुन समय बितेपछि बृद्धहरुको जनसंख्या बढ्ने कुरो अबस्यम्भाबी छ । ति बृद्धहरुको आर्थिक,सामाजिक र स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्ने चुनौती राज्यमाथि पर्ने हुनाले सबल नीति बनाउनु जरुरी देखिन्छ । समयमै योजना नबनाए यस्ता वाक्य सुनिरहनुपर्छ ” छोराहरु बुहारी ले लगे । छोरीहरु ज्वाँईले लगे । बुढीलाई भगवानले लगे। म बुढोलाई कुर्न को आउला र बाबु ? “